निर्मला हत्या प्रकरणः को–को छन् शंकाको घेरामा ? निलम्बित प्रहरीमाथिको आरोप पुष्टि भए बर्खास्त ! – Setosurya
बलात्कारपछि हत्या भएपछि प्रहरीले नै नक्कली अभियुक्तका रुपमा दिलिपसिंह विष्टलाई पक्राउ गर्दै सार्वजनिक गरेको थियो । दिलिपको डीएनए परीक्षणका क्रममा नमिलेपछि साधारण तारेखमा रिहा गरिएको थियो ।
नक्कली अभियुक्त बनाउने र अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको आरोपमा तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरीका एसपी डिल्लीराज विष्टसहित केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट खटिएका डीएसपी अंगुर जिसी, कञ्चनपुर प्रहरीका तत्कालीन डीएसपी ज्ञानबहादुर सेटी, वडा प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका इन्स्पेक्टर जगदिश भट्ट, कञ्चनपुर प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृत इन्स्पेक्टर एकेन्द्र खड्का र अस्थायी प्रहरी चौकी सालघारीका सई रामसिंह धामी निलम्बनमा परिसकेका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्मला हत्याकाण्डमा प्रहरीको भूमिकाको अनुसन्धान गर्न डीआईजी धिरु बस्न्यातको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय छानबिन टोली गठन गरेको छ ।
यसअघि भदौ १४ गते एसएसपी सुवेदी नेतृत्वको समितिको छानबिनले गरेको सिफारिसका आधारमा ६ जना प्रहरी अधिकृत निलम्बनमा परेका हुन् । त्यही टोलीको दायरा फराकिलो पारेर डीआईजी बस्न्यातलाई टोलीको प्रमुख बनाइएको हो । टोलीले आइतबारबाटै काम सुरु गरेको छ । टोली निलम्बनमा परेका र तत्कालीन समयमा निर्मला पन्त हत्याको अनुसन्धानमा संग्लन सबै दर्जाका प्रहरीलाई काठमाडौं झिकाएको छ । टोलीका एक सदस्यले बाह्रखरीसँग भने,‘‘हेडक्वार्टरमै सबैको बयान लिने क्रम सुरु भएको छ । अनुसन्धानमा क्रममा अरु प्रहरी पनि तानिन सक्छन् । प्रारम्भीक अनुसन्धानमा निलम्बनमा परेका प्रहरी अधिकारीको भूमिका पुष्टि भए उनीहरुलाई संगठनले बर्खास्तसम्म गर्न सक्छ ।’’
कल डिटेल लगायतको अनुसन्धानमा सीआईबीको टोली सक्रिय छ । प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘‘गोप्य अनुसन्धानको दायरमा केही स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधिसँगै प्रहरीकै केही अधिकारी रहेका छन् ।” १२खरीबाट साभार
बर्दियामा को कहाँ कतिले अगाडि? हेर्नुहोस् अपडेट
गृहमन्त्रीकाे अादेशमा पूर्वमन्त्रीसहित ६ जनामाथि चलाइयाे मु्द्दा
पर्वत कांग्रेसमा तीब्र असन्तुष्टी, १० जना बढि नेताले असंतुष्टि जनाउँदै गरे यस्तो तयारी !
रारा तालको किनाराबाट के भने प्रधानमन्त्री ओलीले ? १८ पन्नाको सम्वोधन यस्तो छ (पूर्णपाठ)
प्रतिनिधि-सभा समानुपातिक मतपरिणाम (अपडेट ८४,०१,८५५ मतगणना समपन्न) हेर्नुहोस् कसको कति ?
विद्युत् भार कटौती हटाउन सरकारले उद्योगीको साथ खोजेको छ : ऊर्जामन्त्री शाही
भारत र चीन जोड्ने सुनौली-कोराल्ला सडकको पर्वत खण्डमा तीन पुलको एक साथ सुरुवात, सांसद लम्सालले गरे शिलान्यास